Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 oomishu ijaarramuufi
Tuesday, 15 November 2016 09:06
Finfinnee, Sadaasa 5,2009(oromipo) – Gaazii uumamaa fayyadamuun waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 jiddu galli oomishu Doolaara biiliyoona 2.5n ijaarramuufi.
Dhaabbata Misoomaa mootummaa Morookoo waliin qindaa’uuun kan ijaarramu jiddu galli kuni warshaalee xaa’oo oomishan 7 of keessatti hammata.
Daangaa Dirree Dawaa fi naannoo Somaalee godina Shinilleetti lafa heektaara 100rratti kan ijaarramu jiddu galichi, waggaa 5 keessatti fedhii dhiyeessii xaa’oo biyya keessaa guutuu dandeessisa jedhameera.
Qorannaan injinariingii bara dhuftu xumuramee ijaarsi isaa kan jalqabamu yammuu ta’u, waggaa 3 boodas oomisha jalqaba jedhameet eegama.
Ityoophiyaan waggaatti xaa’oo meetrik toonii amma miiliyoona 1 alaa akka galchitutu himama.
Ragaalen akka muul’isanitti biyyattiin xaa’oo alaa gara biyyaa galchitu, galii oomisha alatti ergitee argatturra ni caala.
Qaawwa kanas guutuuf oomisha xaa’oof kan oolu gaazin uumamaa naannoo Somaaletti argameera.
Daayreektarri olaanaa Inistiitiyuutii Galteewwan Keemikaalaa fi Koonistiraakshinii Misooma Indaastirii obbo Saamu’eel Halaalaa akka jedhanitti godina Shinilleetti jiddu gala oomisha xaa’oo kana ijaaruuf qophiin taasifamaa jira.
Warshaaleen 7 jiddu galicha keessatti ijaarramanis waggaatti xaa’oo Yuuriyaa meetriik toonii miiliyoona 1.1 fi gosa xaa’oo NPSN meetriik toonii miiliyoona 1.5 oomishuu danda’u.
Kunis waggaatti gaazii kiyuubiikii tiriiliyoona 0.8 barbaada.
Daayreektarichi akka jedhanitti oomishti xaa’oo kuni fedhii xaa’oo biyya keessaa guutuun isa alaa dhufu guutumaa guututti hambisuu danda’a.
Xaa’oon oomishamus fedhii biyyoo naannoorratti akka bu’uuru eerameera.
Qorannoon injiinariingii proojaktichaas Dhaabbata Misoomaa Idil Addunyaa Moorookoo xaa’oo oomishuun beekkamu OCP waliin qindaa’uun gaggeeffamaa jira.
Waliigalteewwan misooma waliinii barana ega gaggeesffamaniin booda, egere dhumarrammoo hojiin qorannaa fi diizaayinaa ni xumuramu jedhameet eegama.
Ijaarsa proojaktichaaf baajat Birrii biiliyoona 55 ol keessaa 60% liqaa baankotarraa argamuun, kan hafe 40% ammoo mootummaa Ityoophiyaa fi Moorookotu danda’a.
More in this category: « Marii fi gamaaggamni haaromsaa milkaa’aa ture – obbo Fiqaaduu Tasammaa Abbaan taayitichaa itti fayyadamni jallisii cimaa akka jiru ibse »
Torbe Kana 1671
Ji'a Kana 1671
01/05/07 irraa eggalee 3422842